Uwusebenzisa njani umsebenzi? "Ndikhumbuze ukuba ndiphumle" Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uwusebenzisa njani umsebenzi? "Ndikhumbuze ukuba ndiphumle"
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 277
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abanomdla Chitha iiyure kunye neeyure ubukele iividiyo kwiYouTube olu khetho lutsha lunokuba nomdla kuwe. Kutshanje, iqonga lifake isixhobo esivumela ukuba sifumane njengohlobo lwe-alamu xa sikwi sicelo ixesha elide.
Eli nqaku litsha livumela abasebenzisi ukuba baziswe kuYouTube xa bebukele iividiyo eqongeni kangangexesha elide. Ukuba ufuna isicelo sikwazise ukuba lixesha lokuba uthathe ikhefu kuya kufuneka utshintshe izinto ezithile kuseto lweakhawunti yakho.
I-YouTube iyakwazisa xa ilixesha lokuphumla
Iqonga leYouTube libe lelinye lezona zigqibeleleyo nezicetyiswayo Xa kuziwa ekubukeni iividiyo simahla, nangona kunjalo, abasebenzisi abaninzi bathanda ukuchitha iiyure ezinde phambi kwescreen sesixhobo sabo bejonga nasiphi na isixa somxholo.
Ukuze ndi sincede silawule ixesha Ukuba sidlula phambi kwesikrini, isicelo seYouTube sisungule isixhobo esinomdla esivumela ukuba simisele ixesha lokuhlala ngaphakathi kweqonga. Nje ukuba elixesha lidlule, siya kufumana isaziso sokusikhumbuza ukuba lixesha lokuphumla.
Amanyathelo okwenza olu khetho lusetyenziswe
Ngaba ungathanda ukuba isicelo se-YouTube sikuthumelele isaziso xa ubuseqongeni iiyure ezininzi? Ngoku kunokwenzeka ngokuvula inketho entsha esongezwe kutshanje. Lo ngumsebenzi "Ndikhumbuze ukuba uthathe ikhefu".
Olu khetho lutsha luya kukuvumela amaxesha ngamaxesha (umsebenzisi nguye omisela ixesha lokuphumla) isicelo esinakho ndikuthumele isaziso ekwazisa ukuba lixesha lokuba uthathe ikhefu elifutshane ngaphakathi kweqonga. Ukwenza lo msebenzi ulula kwaye apha sichaza amanye amanyathelo:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile vula usetyenziso lweYouTube kwiselula yakho okanye isixhobo osithandayo.
Yenza Cofa kumfanekiso weprofayile okanye i-avatar ebonakala kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Cofa kwindawo okhetha kuyo "ukuseta”Ukufikelela kwimenyu yesethingi yesicelo.
Ngoku kufuneka ukhethe ukhetho "ngokubanzi"
Lixesha lokuba isebenze ibhokisi "Ndikhumbuze ukuba ndithathe ikhefu"
Into eseleyo ukuyenza yile setha ixesha apho sifuna ukuba isicelo sisithumele isaziso sokuba lixesha lokuphumla.
Umsebenzisi ngulowo uthatha isigqibo ngenani leeyure kunye nemizuzu ngubani ofuna ukuhlala eqongeni. Ukuba ukhetha ukuphindaphinda kwesikhumbuzi ukuba ibeyure enye kunye nemizuzu elishumi, emva koko isicelo siya kukuthumela isaziso xa ixesha liphelile.
Ndikhumbuze xa ilixesha lokulala
Isicelo sikwakuvumela ukuba uqwalasele iakhawunti yakho ukuze fumana isaziso esisikhumbuza ukuba lixesha lokulala:
Vula isicelo kwiselula yakho
Cofa malunga ne icon yakho yomfanekiso
Cofa ku "Cwangcisa"
Khetha "Ngokubanzi" kwaye ujonge ibhokisi "Ndikhumbuze xa ilixesha lokulala"
Beka enye ixesha lokuqalisa nokuphela. Ekupheleni kwelo xesha isicelo siya kukwazisa ukuba lixesha lokulala.
1 I-YouTube iyakwazisa xa ilixesha lokuphumla
2 Ndikhumbuze xa ilixesha lokulala
Usasaza njani bukhoma kwiYouTube?
Ndifuna ukwazi indlela yokusebenzisa i-Instagram